လမ်းပြကြယ်: The Australian Media မှ ဆောင်းပါးရှင်Benedict Rogers and Joseph Loconteတို့ရေးသားသောNOW Aung San Suu Kyi is free, world leaders must fight for real democracy.
The Australian Media မှ ဆောင်းပါးရှင်Benedict Rogers and Joseph Loconteတို့ရေးသားသောNOW Aung San Suu Kyi is free, world leaders must fight for real democracy.
FOR years, the international community and human rights activists have campaigned for the freedom of Aung San Suu Kyi, Burma's democracy leader and Nobel laureate. Watching her leave her house after 15 years and 20 days in detention was as momentous as the scenes of Nelson Mandela leavingaSouth African prison 20 years ago.
၁၅နှစ်နဲ့ ရက် ၂၀ အကြာ နေအိမ်မှာ ထိန်းသိမ်းခံရာကနေ ပြန်လွတ်လာတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရတာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ က နဲလ်ဆင်မန်ဒဲလား တောင်အာဖရိကအကျဉ်းထောင်ကနေ ပြန်လွတ်လာတဲ့မြင်ကွင်းလို အမှတ်ရထင်ကျန်ရစ်ပါတယ်။
There is one key difference. Mandela was freed because South Africa's apartheid regime was crumbling. Not so in Burma. The dictatorial regime of Than Shwe has released Suu Kyi not asastep towards political liberalisation but asaploy to get the international community off its back. The world's democratic leaders must send the regimeastrong and unambiguous message: real change will come only if all political prisoners, numbering more than 2100, are freed, and the military ends its offensives against ethnic civilians. Rape, forced labour, torture, the forcible recruitment of child soldiers and the destruction of villages must stop.
အဲဒါနဲ့မတူတဲ့ အဓိကခြားနားချက်တခုရှိပါတယ်။ နဲလ်ဆင်မန်ဒဲလားလွတ်လာတာက တောင်အာဖရိကရဲ့ အသားအရောင် ခွဲခြားရေးအစိုးရ ယိမ်းယိုင်ပြိုလဲနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သန်းရွှေရဲ့အာဏာရှင်အစိုးရ က စုကြည်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တာဟာ နိုင်ငံရေးအရလွတ်လပ်မှုတွေကိုဦးတည်တဲ့ခြေတလှမ်းအဖြစ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံ တကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက စိတ်သက်သာရာရစေဖို့(ဖိအားတွေလျော့ကျစေဖို့) အစီအစဉ်အကွက်ချလုပ်ဆောင်ချက်တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ အားကောင်းပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စကားတွေကို စစ်အစိုးရဆီ ပို့ရပါမယ်။ အဲဒါကတော့ စစ်မှန်တဲ့အပြောင်းအလဲဆိုတာဟာ ၂၁၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွှတ်ပေးမှ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအရပ်သားတွေကို စစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေရပ်တန့်မှဖြစ်ပါမယ်။ မုဒိမ်းကျင့်တာတွေ၊ အတင်းအကျပ်အလုပ်စေခိုင်းတာတွေ၊ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်တာတွေ၊ ကလေးစစ်သားအဖြစ် အတင်း အကျပ်သွတ်သွင်းတာတွေ၊ ကျေးရွာတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာတွေကို ရပ်တန့်ပစ်ရပါမယ်။
Suu Kyi's National League for Democracy, which won 82 per cent of the seats in 1990 but was banned from government, remains an outlawed political party. A dialogue between the regime, the democracy movement and the ethnic nationalities must begin.
UN Secretary-General Ban Ki-moon must discoverameasure of courage and creativity. His response to the regime's sham election held earlier this month -- "insufficiently inclusive"-- was anaemic.
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းဟာ ရဲရင့်ပြောင်မြောက်ပြီး ထိရောက်မယ့်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရပါမယ်၊ စစ်အစိုးရရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလစောစောပိုင်းက သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဟာ ပါသင့်တာတွေမပါတဲ့အတွက် အားမရှိပါဘူး။
An election that barred Suu Kyi and the NLD from participating, guaranteed 25 per cent of the assembly seats to the military before the voting began, disenfranchised at least 1.5 million people living in ethnic areas where voting was not held, and was marked by rigging and intimidation wasacynical charade andanational scandal.
This is the same paranoid regime that prevented international aid workers entering the country following the devastation of Cyclone Nargis in 2008. It took pressure from the Secretary-General, China, members of the Association of Southeast Asian Nations -- as well as the presence of French, British and American naval ships loaded with aid off Burma's coast -- to get Than Shwe to ease some restrictions. Even then, access was limited and much of the international aid was stolen or diverted.
What next? Dialogue is the one policy that unites everyone. The UN Security Council, General Assembly, Human Rights Council and Secretary-General, the European Union, the US, ASEAN and even China have called for dialogue. Suu Kyi and the ethnic nationalities have made dialogue and national reconciliation pillars of their platform. Only the regime so far has refused, but it is clear now that the alternative to dialogue is more ethnic conflict and political instability.
Ban should initiate high-level diplomatic engagement, coupled with targeted pressure. For years, Burma has been handled by low-level UN envoys who have been snubbed and mocked by the generals. The Secretary-General must show leadership and deploy all resources available to kick-startaUN-led dialogue.
ဘန်အနေနဲ့ ပစ်မှတ်ထားဖိအားပေးမှု ပါတဲ့ အဆင့်မြင့်သံတမန်ရေးဆက်သွယ်မှုကို လုပ်ရပါမယ်။ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ် သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဆင့်နိမ့်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပဲ ကိုင်တွယ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက အရေးမစိုက်တာတို့ ငြင်းပယ်တာတို့ကို လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာ ဦးဆောင်မှုပြသပြီး ကုလသမဂ္ဂဦးဆောင်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတခုကို ရနိုင်သမျှနည်းလမ်းအခြေအနေအကုန်သုံးပြီး စတင်လုပ်ဆောင်ရ ပါမယ်။
The time for timidity has passed. Ban should dispatch his chief of staff to the region immediately and begin the process of challenging the regime to enter into dialogue. At the same time, the UN should establishacommission of inquiry to investigate crimes against humanity. Suu Kyi's release could provide an opportunity for real change in Burma, but only if the international community, led by Ban, finally takes the action required.
ဘန်ဟာ သူ့ရဲ့ လက်ထောက်ဦးစီးအရာရှိချုပ်ကို အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်းကို အမြန်ဆုံးစေလွှတ်ပြီး စစ်အစိုးရကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်လာဖို့အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ လူမဆန်စွာပြုကျင့်မှုတွေအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တရပ်ကို ထူထောင် သင့်ပါတယ်။ စုကြည်ပြန်လွတ်လာတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတရပ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘန်ကီမွန်းဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေလုပ်ဆောင်မှပဲ စစ်မှန် တဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်လာမှာပါ။
Benedict Rogers isaLondon-based human rights activist working with Christian Solidarity Worldwide. He has made more than 30 visits to Burma. Joseph Loconte isalecturer in politics at the King's College, New York
ဘာသာပြန်သူ။ ။ဦးကျော်ကျော်စိုး (league for Democracy in Burma -LDB( JAPAN))